Barcelona Oo Qorshaynaysa In Heshiis Is-dhaafsi Oo Philippe Coutinho Iyo Neymar Uu Dhex Maro PSG – Cadalool.com
Barcelona Oo Qorshaynaysa In Heshiis Is-dhaafsi Oo Philippe Coutinho Iyo Neymar Uu Dhex Maro PSG
Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa dejisay qorshe cusub oo ay PSG kaga dhaadhicinayso inay u ogolaato in laacibka reer Brazil ee Neymar uu dib ugu laabto garoonka Camp Nou oo 220 milyan oo Euro ay kooxda reer France kaga qaadatay sannad iyo badh ka hor.
Xagaagii 2017 ayaa Barcelona ay jeebadda gashatay lacag badan oo ay markiiba ku farraqday xiddigo beddelkiisa ah markii ay PSG kala wareegtay Neymar Jr, hase yeeshee, waxay beddelkiisa u doonatay Borussia Dortmund oo ay lacag lagu qiyaasay 110 milyan Euro kaga soo iibsatay Ousmane Dembele iyo Philippe Coutinho oo ay suuqii January ee ku xigay 144 milyan oo Euro kaga soo qafaalatay Liverpool.
Inkasta oo lacagtii ay ka heshay iibka Neymar ay in ka badan ku bixisay labadan laacib, haddana midkoodna muu samaynin wax muujinaya inuu beddeli karayo oo uu shaqadiisii oo kale qaban karayo.
Sida uu qoray wargeyska London Evening Standard ee kasoo baxa waddanka Ingiriiska, Philippe Coutinho wuxuu si buuxda uga baxay shaxda tababare Ernesto Valverde oo ka door biday saddexleyda hore ee Messi, Suarez iyo Dembele, halka dhexdana ay lama taaabtaan yihiin Rakitic, Busquets iyo Arthur.
Tani waxay mugdi gelisay mustaqbalka xiddigan oo doonaya raadinaya qaabkii uu uga bixi lahaa kooxdan, laakiin kalidii damac kuma jiro, waxaase ay Barcelona qudheedhu doonaysaa inay dib usoo ceshato xiddigeedii hore ee Neymar oo ay dib iskula hesho weerarkii dilaaga ahaa ee MSN.
Barcelona waxa la sheegay inay si joogto ah xidhiidh ula samaynaysay Neymar oo wararku sheegayaan inaanu ku faraxsanayn horyaalka Ligue 1, sidoo klena ay jiraan sababo ku qasbi karaya PSG inay iibiso, kuwaas oo ay ugu weyn tahay sharciga dhaqaale wanaagga ee FFF iyo baadhitaano ay UEFA ku samaynayso.
Si kastaba ha ahaatee, Coutinho ayaa ku jira xaalad adag, 45 ciyyaarood oo uu u saftayna waxa uu dhaliyey 15 gool.